के यो हत्या रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने तिमीलाई लाग्दैन ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
के यो हत्या रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने तिमीलाई लाग्दैन ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ८ आश्विन बुधबार १४:५९
यो त्रासद तस्बीर मेरै गाउँ कावासोतीको रहेछ । हिजो ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा यसमा सवार पाँचै जना यात्रुको मृत्यु भएको खबर पढेर स्तब्ध छु ।
यो गाड़ी ह्युन्डाईको Grand i10 मोडल हो र यसको नेपालमा बजारमूल्य २५ लाख रुपियाँ अर्थात् १८ हजार ब्रिटिश पाउण्ड रहेछ । बेलायतमा यसको मूल्य नेपालभन्दा ठ्याक्क आधा अर्थात् करिब ९ हजार पाउण्ड पर्छ । विश्वकै समृद्ध देशका धनी उपभोक्ताले ९ रुपियाँमा किन्न पाउने एउटा वस्तु निर्धन देशका गरिब उपभोक्ताले १८ रुपियाँ तिर्न पर्नु आफैमा एउटा मजाक हो ।
कुरो यत्तिमैं सकिन्न । दोब्बर मूल्य तिरेपछि क्वालिटी र सेफ्टी पनि राम्रो या कम्तिमा बराबर हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, बेलायतमा ९ लाख तिर्नेले जुन गुणस्तर र सेफ्टी फ़ीचर पाउँछ, डबल पैसा तिरेर त्यसको आधा पनि नेपाली उपभोक्ताले पाउँदैन ।
यो चरम लूट र राष्ट्रिय लज्जामात्रै होइन, मानवीय अपराध पनि हो । हाम्रा शासकको नालायकी पन र अदूरदर्शिताको परिणाम आज नागरिकले भोगिरहेछन् । गाडीको डबल मूल्य तिरेर टिनको बाकस किनेजस्तो लाग्छ ।
हामी गरिब छौं, हाम्रा सड़क विश्वकै असुरक्षित सड़कमध्ये पर्दछन् । एकमात्र राष्ट्रिय राजमार्गमा समेत राम्ररी लेन छुट्टिएको छैन । नदी किनारका सड़कमा पर्खालहरू छैनन् । स्पिड नियन्त्रणका स्थायी संयन्त्र छैनन् । राजमार्गमा समेत दायाँबायाँ पैदल यात्रीहरू हुन्छन् ।
यस्तोमा दुई रुपियाँ बरु महँगो परोस्, तर संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित कारमात्रै देशमा आयात गर्न पाउनुपर्ने हो । ‘क्रयाश टेस्ट’मा उच्चतम अङ्क प्राप्त नगरेका कारहरू प्रतिबन्धित हुनुपर्ने हो ।
ड्राइभरमात्र होइन, प्यासेन्जरदेखि पैदलयात्रीको सुरक्षासम्मका कुरा चेक गरेर तिनले सुरक्षा नम्बर पाउँछन् । तर अवस्था के छ भने दुई रुपियाँ या दुई हजार बढ़ी मात्रै होइन, लाखौं बढ़ी तिरेर समेत हामी सबैभन्दा असुरक्षित र प्रदूषणकारी गाड़ी किनिरहेछौं ।
बेलायतमा ९ हजारमा बिक्ने गाड़ीले पनि भन्सार तिरेकै हुन्छ, सड़क दस्तुरदेखि अन्य कर तिरेरै आएको हुन्छ । कामदारले पाउने लाखौंको तलब र महँगो शोरूमको खर्च पनि जोड़िएकै हुन्छ ।
नाफा पनि पाउण्डमैं जोडिन्छ । ग्यारेन्टी पनि दिनै पर्यो । यो सबै गरेर ९ हजारमा बेच्न मिल्छ भने हामीले त अझ सस्तोमा बेच्न मिल्नुपर्ने हो । तर सरकारले गाड़ीको मूल्यभन्दा बढ़ी त कर नै लिने रहेछ । नाफा पनि आफूखुशी राखे भयो । उपभोक्ताबारे देशमा कसले सोच्छ र ?
ए सरकार, कर लेऊ । विश्वकै महँगोमा कार बेच । तर कम्तिमा विश्वले पाइरहेको जति गुणस्तर त ग्यारेन्टी गर न यार ! माथिको तस्बीर दुर्घटना होइन, हत्या जस्तो हो ।
तिमी त जनमुखी सरकार हौ, जनताले बढ़ी पैसा तिरेर पनि कमसल सामान पाउनु र जिउधनको ठूलो असुरक्षा हुनुमा तिम्रो मन दुख्दैन ? तिमीलाई आत्मग्लानि हुँदैन ? के यो हत्या रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने तिमीलाई लाग्दैन ?